War-bixin Xiiso leh: Faahfaahin Ku Saabsan Awoodii Ciidan Ee Qaybtii 26-tanaad Oo ka tirsanayd Ciidankii Somalia Ee Loo Adeegsaday Xasuuqii Somaliland. | Xarshinonline News
War-bixin Xiiso leh: Faahfaahin Ku Saabsan Awoodii Ciidan Ee Qaybtii 26-tanaad Oo ka tirsanayd Ciidankii Somalia Ee Loo Adeegsaday Xasuuqii Somaliland.
Posted by xol2 on July 20, 2010 · Leave a Comment
Taariikhdu waxbay Hagtaa dadkuna wuu haybiyaa….Waa lagama maarmaan in dhalinyarada iyo Jiilka soo kacaya lagu baraarujiyo oo la baro wax yaalihii keenay Halaagii, Xasuuqii iyo burburkii Somaliland iyo Somalia ka dhacay.Ciidankii Somalia ee la aasaasay markii Somalia Xornimada qaadatay, waxa ujeedadiiso ahayd in uu Difaaco dalka iyo dadkiisa, laakiin nasiibdaro waxa loo adeegsaday oo lagu xasuuqay dadkii uu difaaci lahaa.
Baadhitaan dheer iyo raad raac taariikheed oo aan sameeyey ayaan ku ogaaday qaab dhismeedkii iyo qaabkii loo istimaali jiray awoodii ciidan ee Qaybtii 26-tanaad.
Qaybtii 26-tanaad waxay ahayd ta ugu balaadhan uguna awooda badan Ciidankii Somalia. 1960 ilaa 1990 oo ah muddo 30 sano, Taliskii sare ee Qaybta 26-tanaad waxa iska kala bededdelay Saraakiishan hoos ku qoran.
1-General Jaamac Aw Muse Samater (Majeerteen)
2-General Mohamed Ali Mire…………….(Majeerteen)
3-General Muse Xasan Abdulle…………(Ogaadeen )
4-General Cismaan Saalax C/karim….(Majeerteen)
5-General Yuusuf Ahmed Salxaan……..(Gabooye ka soo jeeda degaanka majeerteeniya)
6-General Siciid Farax gooje…………….(Mareexaan)
7-General Mohamed Xaashi Gaani…..(Mareexaan)
8-General Mohamed Siciid Morgan…..(Majeerteen)
9-General Ahmed Warsame Mohamoud…(Mareexaan)
10-General Mohamed Hussein Daa’uud (Awrtable)
11-General Cismaan Sheikh Cali Badmaceeye (Hawiye..Abgaal)
Marka loo kuurgalo lana qiimeeyo haybta saraakiisha iska beddeshay Taliskii Qaybtii 26-tanaad ilaa sanadkii 1960-kii, waxa si cad u soo baxay in Quwaddii ciidan ee Qaybta 26-tanaad lagu jaheeyey Cabudhinta iyo xasuuqa Qoomiyada Reer Somaliland. Taliska Qaybta ayaa ahaa mid u xidhan *monopoly* Saraakiil Beel kaliya ka soo wada jeeda, taasina waata keentay kacdoonkii ay Reer Somaliland ku diideen Maamuladii koonfurta Somalia.
Sidee ayuu ahaa qaab dhismeedkii Qaybtii 26-tanaad?
Hargeysa waxa ahaa xarunta taliska dhexe, saadka, keydka hubka & Rasaasta Cadaadley,hawlgalinta,Gaadiidka,Ururka Koofiyadcasta iyo Hangashta, Maxkamada Ciidanka iyo Xarunta Caafimaadka ee Ciidanka. waxa jiray seddex gaas oo kala ahaa:
1. Gaaska1-aad fadhigiisu ahaa Boorame.
2. Gaaska 2-aad fadhigiisu ahaa Hargeysa.
3. Gaaska 3-aad fadhigiisu ahaa Burco.
Fiiro gaar ah: Dagaalkii ku dhex-maray Ciidamadii Xaq-u-dirirka SNM iyo Kuwii Siyaad Bare u dagaalamaay Magaalada Burco 27-kii May 1988, ka dib Gaaskii 3-aad waa la balaadhiyey, waxaana laga dhigay Qaybta 27-tanaad, waxaana taliyey looga dhigay Cabdicasiis Ali Bare.
Waxa kale oo taliska Qaybta 26-tanaad si gaar ah u hoos imin jiray….
1-Guutada 4-aad ee Madaafiicda Hargeysa.
2-Guutada Gantaalaha Hargeysa.
3-Taliska Ciidanka Cirka Hargeysa.
4-Guutada Taangiyada ee Benderwanaag.
5-Saldhiga Berbera ee Cirka-Dhulka & Badda.
6- Wershedda kabida Hubka ee Hargeysa.
7-Dugsiga Tababarka Ciidanka ee Mandheera.
8-Dugsiga Tababarka ee Dararweyne oo lagu tababari jiray dadka Qaxoontiga ah oo qaab qabiil loo soo xulay.
9-Dhamaan Askarta ilaalisa baraha kontoroolada oo u badnaa koofiyad cas iyo Hangash.
Waxa iyana jirtay Guutada 24-tanaad oo fadhigeedu ahaa Hargeysa, Guutadaasi wey ka madaxbanaanayd Gaaska 2-aad, waxayna toos u hoos tegi jirtay Taliska dhexe ee Qaybta 26-tanaad. Guutadaa 24-tanaad oo shaqadeedu ahayd Xasuuqa iyo dhaca hantida shacabka waxa ku mataanaysnaa Ururka Beebeeyada oo Xeradiisu ku taalay Rugta Xaraf.
Seddexda Gaas waxa kale oo hoos iman jiray guutooyinka kala ah:
1. Guutada Beer.
2. Guutada Oodweyne.
3. Guutada Goryacawl.
4. Guutada Lug-haya.
Ururada iyo guutooyinka kaydka ah iyaga tiro lagumo koobi karo, waxa kale oo qaybta 26-tanaad si dadban u hoos tegi jiray taliskii Hangash-ta oo xaruntiisu ahayd Hargeysa, balse xafiisyo ku lahaa degmooyin badan, markii dagaalkii SNM bilaabmay waxa ku dhacay Quwadii 26-tanaad jaahwareer iyo burbur baahsan, waxay u babac dhigi kari waayeen Weeraradii Jabhadii SNM ee Xaq-u-dirirka ahayd. Jabhada oo si niyad iyo mintidnimo ah u dagaalamaysay ayaa muddo laba sano ka yar ku curyaamisay Qaybtii 26-tanaad iyo waliba Gurmadkii joogtada ahaa ee ay ka helaysay Taliskii Xarunta Ciidanka ee Xamar.
Guud ahaan Ciidankii Somali National Army gaar ahaan Qaybtii 26-tanaad, waxay Degaanada Somaliland ka gaysteen Xadhig, Jiidh dil, Dhac, kufsi iyo Xasuuq bahaasan oo ay ku naf waaeeyeen dad ka badan 100,000 oo qof, *Missing People*Dadka aan raq iyo ruux midna aan la haynin meesha ay ku danbeeyeen waxa lagu qiyaasaa 15,000 oo Qof. Qaxoontiga iyo dadka la barakiciyey waxa ay gaadhayaan 1 million, kuwaas oo wali daadsan Dunida dacaladeeda. Hantida la dhacay iyo ta la burburiyey waxa iyana ay gaadhaysaa in ka badan 100 billion US dollar. Gacan-ku-dhiiglayaashii Danbiyada laxaad ka leh gaystay wax Hormood ka ah Mohamed Ali Samater iyo Mohamed Siciid Morgan oo wali aan Maxkamad Sharciya la soo taagin.
Waxa Soo Diyaariyey: Osman Abdillahi Sool,
← Rayslawasaaraha Itoobiya oo ku baaqay in la cidhib-tiro kooxda Alshabaab
Maxaa sababay saxeexa Dr. Idiris ee heshiiskii uu hore ugu diiday Baanka Adduunka? →